ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံ ဖြန့်ဖြူးရေးသေတ္တာ ထုတ်လုပ်သူများ - တရုတ်နိုင်ငံ ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံ ဖြန့်ဖြူးရေး သေတ္တာ တင်သွင်းသူများနှင့် စက်ရုံ၊
1. ရေနံထုတ်ယူခြင်း၊ သန့်စင်ခြင်း၊ ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း၊ ကမ်းလွန်ရေနံပလပ်ဖောင်း၊ ရေနံတင်သင်္ဘော စသည်တို့ကဲ့သို့ မီးလောင်လွယ်ပြီး ပေါက်ကွဲလွယ်သော ဓာတ်ငွေ့ပတ်ဝန်းကျင်တွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုပါသည်။ ၎င်းကို စစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း၊ ဆိပ်ကမ်း၊ စပါးသိုလှောင်မှုနှင့် သတ္တုများကဲ့သို့သော မီးလောင်လွယ်သော ဖုန်မှုန့်နေရာများတွင်လည်း အသုံးပြုပါသည်။ လုပ်ဆောင်နေသည်;
6. အလင်းရောင် သို့မဟုတ် ဓာတ်အားလိုင်းများ ဖြန့်ဖြူးခြင်းအတွက်၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကို အဖွင့်အပိတ် ထိန်းချုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း ဖြန့်ဖြူးခြင်း။
BF28159-g စီးရီး ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သော အလင်းရောင် (ပါဝါ) ဖြန့်ဖြူးရေးသေတ္တာ
6. အပူချိန်အုပ်စုတွင်သက်ဆိုင်သည် T1 ~ T6;
7. ထိန်းချုပ်ထားသော ဆားကစ်တွင် ဝန်ပိုခြင်း၊ ဝါယာရှော့နှင့် ကာကွယ်ခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ပြီး အကိုင်းလိုင်းများအတွက် သီးခြားမီးပွိုင့်များ ပြုလုပ်ပါ။
G58-Series Explosion-proof illumination (ပါဝါ) ဖြန့်ဖြူးရေးသေတ္တာ
BF28159-g DQ စီးရီး ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သော ပါဝါဖြန့်ဖြူးရေးသေတ္တာ (လျှပ်စစ်သံလိုက်များ စတင်)
7. ထိန်းချုပ်ထားသော ဆားကစ်တွင် ဝန်ပိုခြင်းနှင့် ဝါယာရှော့ဖြစ်ခြင်းများကို ကာကွယ်ပြီး အကိုင်းလိုင်းတစ်ခုစီအတွက် အလင်းရောင် (ပါဝါ) ခလုတ်အဖြစ် သို့မဟုတ် ဝန်အားအဆင့်မှစတင်ခြင်းနှင့် မော်တာစတင်ခြင်း၊ ရပ်ခြင်း၊ ရှေ့နှင့် နောက်ပြန်လှည့်ခြင်းအဖြစ် အသုံးပြုပါ။
BDG58-DP စီးရီး ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံနိုင်သော ပါဝါသေတ္တာ (ကေဘယ်ကြိုး ထိန်းသိမ်းခြင်း အစုံ)
6. ဆိုက်ပေါ်ရှိ မိုဘိုင်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ပါဝါဖြန့်ဖြူးခြင်းအတွက် အဓိကအသုံးပြုသည်။
G58-C စီးရီး ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံ အလင်းရောင် (ပါဝါ) ဖြန့်ဖြူးရေးသေတ္တာ (ပါဝါထိန်းသိမ်းသည့် ပလပ်ပေါက်သေတ္တာ)
6. ယာယီ သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းအလုပ်များအတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးခြင်းအတွက် အဓိကအသုံးပြုသည်။
G58-g စီးရီး ပေါက်ကွဲမှု ချေးခံနိုင်သော အလင်းရောင် (ပါဝါ) ဖြန့်ဖြူးရေး သေတ္တာ